Imikhiqizo emisha Factory - China Imikhiqizo Emisha Abenzi, abahlinzeki
I-Flat Head Cylindrical Rivet Nut
I-Steel Button Head Blind Rivet
I-rivet iqukethe umkhono we-rindt we-cylindrical onekhanda elikhulisiwe elenziwe ngobude ekugcineni; Ikholomu eyinhloko ehlanganisa ikhanda nekholomu eyinhloko enentamo ephuke kalula kude nekhanda.
ukuvuleka okuphelile kwe-aluminium steel rivets blind
I-GB12618 RIVET EYIMPUMPUTHE.
I-Aluminium ne-Carbon steel.
Ingasetshenziswa ezingutsheni, izindwangu, izikhwama, ukwakhiwa, ukuhlobisa, indiza, i-air-conditioner.
I-Countersunk Open End Blind POP Rivets
Kuvaliwe Ukuphela kokuzibeka uphawu kwe-pop Rivets
I-Closed End Self Sealing pop Rivets kulula ukuyifaka, ingafakwa ohlangothini olulodwa, ayidingi okunye okufanelekile.
Phula iMandrel Blind Rivet
I-Aluminium / insimbi
Ama-Rivets Aluminium Steel Round Head
Ivezwe endaweni enokhahlo, ukumelana nokugqwala okuhle, okokusebenza okunemvelo.
Khetha izinto zekhwalithi ephezulu ze-aluminium, ezinokusetshenziswa okuhlukahlukene.
uhlobo oluvulekile lwekhanda le-countersunk blind rivet
Lo mkhiqizo wenziwe nge-aluminium nensimbi engagqwali noma i-steel.I-Rivets yenziwe nge-aluminium esezingeni eliphakeme nensimbi engagqwali. Kuyinto anti-ezonakalisayo futhi ukugqwala-ubufakazi futhi emuhle. Imikhiqizo yethu isetshenziswa kakhulu ekwakhiweni, ifenisha, izimboni nokunye.Lokhu kungumkhiqizo ongabizi kakhulu.
ukuvula ukuphela dome ikhanda aluminium steel rivets izimpumputhe
ama-open romet head aluminium steel rivets ayizinhloko ezijwayelekile kakhulu ze-rivet. Isimo se-Dome sinikeza ukubonakala okufana nokufana kwe-radius ngokwe-US Standard. I-RivetKing Aluminium rivets eyimpumputhe icwebezelisiwe ngokugqamile ukwenza ngcono ukumelana ne-oxidation kanye nobuhle jikelele bomkhiqizo o-riveted.
Kuvaliwe Ukuphela Kokuzibopha Okuvalwayo
Izinombolo ezijwayelekile zikazwelonke zama-rivet avaliwe yi-GB12615 ne-GB12616. Kulula futhi kuyashesha ukusebenza ohlangothini olulodwa. Inezici zamandla aphezulu we-shear, anti-vibration kanye ne-anti - high pressure.
Ama-Rivet End Avaliwe I-Aluminium Rivet
I-Materil: Isiqu se-Aluminium Body / Steel
Indawo yokuqedela: iPoland / iZinc yangaphakathi
I-Dia: 3.2 ~ 4.8
Kwenziwe ngentando: Upende okhethekile onemibala njengezidingo zamakhasimende
I-Countersunk Open End Blind POP Rivets ingahlukanisa ubukhulu obuhlukile noma izinto ezahlukene ezithambile nezinzima. Yizinketho zokuqala zensimbi e-riveting, ipulasitiki nezinto eziqhekekile.
I-Flange Enkulu Yandisa Konke Okuphakanyiswa Kwensimbi Yensimbi
I-Flange enkulu yandisa yonke i-Steel Pop Rivets ine-washer enkulu esigqokweni kune-POP Rivets ejwayelekile. Zisetshenziselwa ukuxhuma izingcezu zombili zezinto ngendlela esheshayo nephumelelayo. Ama-flange POP Rivets amakhulu ayizigaxa, aqukethe isigqoko ne-mandrel; ubude be-mandrel buyanqamuka lapho bufakwa.